ကြည့်လုပ်ကြပါဦး စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ရဲ့ အချို့သောဂျာနယ်လစ်တွေရယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြည့်လုပ်ကြပါဦး စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ရဲ့ အချို့သောဂျာနယ်လစ်တွေရယ်
ကြည့်လုပ်ကြပါဦး စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ရဲ့ အချို့သောဂျာနယ်လစ်တွေရယ်
Posted by Davit on May 25, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
ဒေးဗစ်ရယ် … မင်းနှယ့် …. ဘာတွေရယ်ချင်သတုန်းဆိုတော့ကားးးးးးးးးးး……..
ဒီလိုဗျ….ကျွန်တော်တို့ ဒီရွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအခြားသော Blog တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Post တို့ Comment တို့ရေးလိုက်လို့ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဟာ အခြားသော ဂျာနယ်၊ Website ထဲမှာဖေါ်ပြပြီးသားကို ကူးယူရင် မူရင်းဆိုဒ်ကို Credit ပေးတဲ့အနေနဲ့ ကူးယူဖေါ်ပြတဲ့ ဂျာနယ်၊ Website တို့ရဲ့ နာမည်နဲ့ Link ကိုဖေါ်ပြပေးရပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဖေါ်ပြဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် Create လုပ်ပြီးရေးသလိုလိုနဲ့ရေးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းသလဲပေါ့နော်…..ရွာသူရွာသားတွေလည်း အဲ့ဒိလိုမျိုးဘယ်သူ့မှလုပ်ခဲ့ကြတာကို မတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။
ခုတော့ဗျာ……နိုင်ငံရဲ့စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ အချို့သောဂျာနယ်မှာဗျာ (ဂျာနယ်အားလုံးနှင့် ဂျာနယ်လစ်အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) အခြားသော Blog တွေ၊ သတင်းဆိုဒ်တွေက နည်းပညာသတင်း၊ စီးပွားရေးသတင်း၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကို တထပ်တည်းနီးပါးကူးယူပြီး ဂျာနယ်ထဲမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးကို ဖေါ်ပြနေကြသဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီသတင်းကို ဘယ်ဆိုဒ်မှာတွေ့ရှိလို့ ဖေါ်ပြပါတယ်ဆိုတာ လုံးဝ(လုံးဝ) မရေးထားဘူးဗျာ။ အမယ်….အမယ်….သူကလုပ်လိုက်သေး…သတင်းရဲ့အောက်မှာ ဘယ်ဂျာနယ်လစ် ဆိုပြီးတော့ကို သောက်ရှက်မရှိ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကို ဂုဏ်ယူပြီးဖေါ်ပြလိုက်သေး…..ဟေ….ဟေးးးးးးးးးး…..
ယုတ်စွအဆုံး မန်းဂေဇက် ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ Post တွေတောင် ပါလိုက်သေးသဗျို့။ ပါတာမှ ပေါ်တင်ကြီးတွေရယ်ဗျာ… သူများ Post တွေကိုခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ စာမူခရအောင်ဂျာနယ်ထဲကို ထည့်ချင်သပါ့ဆိုလည်း မသိသာအောင် နည်းနည်းပါးပါးလောက်တော့ ကိုယ့်အိုင်ဒီယာလေးနဲ့ ဖြည့်သင့်တာဖြည့်၊ ဖြတ်သင့်တာဖြတ်၊ ရွှီးသင့်သာရွှီးပေါ့ဗျာ။ ခုတော့ ၉၈% က ဒဲ့ချည့်ဗျို့။ တစ်ချို့ သတင်းတွေဆို ၇၀% လောက်က ဒဲ့ဗျာ။
ဘယ်သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ဘယ်ပိုစ့်ဆိုတာတော့ ဒဲ့ မပြောတော့ပါဘူးနော်။ (ကျွန်တော်ယိုးစွပ်ပြီးရေးတယ်ထင်ရင်တော့ တနင်္လာနံ နဲ့ ကြာသပတေးနံပါတဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုဖက်ကြည့်ပါဗျို့) အရင်ကတော့သိဘူးဗျာ….ကိုယ်ကဂျာနယ်မှမဖက်ဘဲကိုး…Facebook တို့မှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုသာဖက်တာဂိုး။ Facebook မှာ Like လုပ်ထားတဲ့သတင်းဆိုဒ်ကလည်း နည်းမှမနည်းဘဲဗျ ။ ခုတစ်လောက်ဂျာနယ်တွေဝယ်ဖက်ကြည့်တော့မှ …….. အာ ….လာ ….လား …….. နည်းမှနည်းပဲဗျ။ ကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ သတင်းတွေအကြောင်းကို ဘလော့ တွေမှာ ဒဲ့ကိုရေးထားတာတွေလေ။
အဓိကကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက ပြည်သူတွေဟာလူတိုင်းအင်တာနက်နဲ့မထိတွေ့နိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ၊ လူမှုရေး၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကို အွန်လိုင်းသုံးနေတဲ့သူတွေလို Update မသိနိုင်ကြပါဘူး။ ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ ဖေါ်ပြမှုကြောင့်သိရှိနိုင်ကြတာပါ။
ဒါပေသိပေါ့ဗျာ……….အွန်လိုင်းသုံးပြီးသတင်းရေးသူ၊ Comment ပေးသူတွေတောင် သူများသတင်းကိုယူပြီးဖေါ်ပြရင် မူရင်းသတင်းရေးသားသူ(သို့)သတင်းလင့်ကို လေးစားသမှုနဲ့ဖေါ်ပြကြသော်လည်း အချို့အချို့သော ဂျာနယ်လစ်ကြီးများကတော့…………………
အော် ငါ့အစ်ကိုမောင်ဗတစ် ရယ်
သူရို့ ခဗျာလဲ လစ်ရင်လစ်သလို တစ်မျိုး
ဗြောင်ပေါ်တင် တစ်မျိုးနဲ့ လုပ်စားခဲ့တာ ကြာပါပြီလေ
ကျုပ်တို့လို ဝါသနာကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ အလကားနီးပါး ရေးနေတဲ့သူတွေ အတွက် အကာအကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေတစ်ရပ်လောက် မျှော်လင့်မိတယ် ဗျို့ ။
ကိုဒေးဗစ်ရေ … အဲ့ဒါမျိုးဖတ်မိခဲ့ဖူးပါတယ် …ဟိုးအရင်ကတည်းက ကူးခဲ့တာ .. အခုထိကူးချတုန်းပဲ .. နောင်လည်းကူးနေကြဦးမယ်ထင်တယ် … . သတင်းလေးအဆင်သင့်ရတော့ သူတို့အတွက် ထီးဖြူ.. ဖိနပ်ပါး လိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးလေ .. အဲ့လိုအဲ့လို … ။ အင်တာနက်ကနေ သတင်းဖတ်သူအများစုက … ဂျာနယ်တွေဝယ်မဖတ်ဖြစ်တော့ .. မသိဘူးပေါ့..ကိုယ်ဖတ်လိုက်တဲ့ဂျာနယ်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ..ကိုယ့်ပို့စ်ပါလာမှ .. ဘာလဲကွဆိုတာမျိုး ထဖြစ်ကြတာ …. ။.လေးပေါက်ကြီးရဲ့စာတစ်ချို့တောင် …ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ .. အရင်က နာမည်မပါပဲ ကူးခံရတယ်လို့ … ကြားခဲ့ဖူးတယ် … ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော် နှစ်ပတ်လောက်က ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ကိုထူးဆန်းရဲ့ ပို့စ့်ကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး ပုံပါ ခိုးရေးထားတာတစ်ခုတောင် တွေ့လိုက်သေးတယ် … ။ သူများဦးနှောက်ဖောက်စားတာ .. အပြစ်မပြောပါဘူး .. ဒါပေမယ့် …. စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးပြောင်ချင်တယ်ဆိုလည်း ပိုင်ရှင်တော့ ထည့်ရေးပေါ့လေ … ။ ၀က်ဖ်ဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်ရှဲတာကို အပြစ်မပြောပါဘူး… သူတို့လည်းအခကြေးငွေယူလုပ်စားတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ .. အခုဟာက ပိုက်ဆံပေးဖတ်ရတဲ့ ဂျာနယ်က… အလကားရတဲ့ သတင်းတွေ ကူးကူးတင်တာကတော့ … သိပ်ပင်ပန်းနေကြဦးမယ် .. အဟိဟိ
ဟုတ်ပါ့ အမရာ…. ရွာသူရွာသားတစ်ချို့ရဲ့ Post တွေပါလာတာ စိတ်လာသဗျို့ (တစ်ချို့ဆို ဖြတ်/ညှပ်/ကပ်တောင် မလုပ်ဘူးရယ်) သူတို့တော်တော်ပင်ပန်းရှာမှာပဲဗျို့။
ကဲ……ဂျာနယ်တစ်ချို့ရဲ့ အယ်ဒီတာကြီးများခင်ဗျား ………………………
တော်ပြီ…..တော်ပြီ ……ဒေါ်မြလေးရဲ့ လေသံနဲ့ဘဲပြောလိုက်တော့မယ် ( မပြောချင်ဘူး…..ပြောချင်ဘူး………….ပြော့ ကို….မပြောချင်ပါဘူး….)
လေးပေါက်တို့လို ခဏ ခဏ ခိုးကူးခံရတဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ စိတ်တိုမှာပေါ့နော်..
ကျွန်တော်တို့လို မရေးတတ်ရေးတတ် ရေးတဲ့သူတွေ အဖို့ ကတော့ ဂုဏ်ယူချင်စရာကြီးလားလို့ .. etone ပြောတာနဲ့ နဲနဲတောင် ဘ၀င်မြင့်သွားတယ် .. :grin: :grin:
လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုး မို့ ကျွန်တော့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော်ကတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျ ။ အင်တာနက်က လူတိုင်းဖတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ ၊ ဂျာနယ် က ဆိုက်ကားသမားလဲဖတ် ၊ ပန်းရံဆရာလည်းဖတ် ၊ဈေးရောင်းသူလည်း ဖတ်ဆိုတော့ ဂျာနယ်မှာ မရေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ဦးထဲ အနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော့်နံမည် မပါလည်း အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ အင်တာနက် ၀င်ရေးနေတာ နံမည်ကြီးချင်လို့ ရေးတာလည်း မဟုတ် ၊ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ ရေးကြတာလည်း မဟုတ် ၊သူများဖတ်စေချင်လို့ ရေးကြတာဆိုတော့ အင်တာနက်ကနေ ကျော်ပြီး ဂျာနယ် အထိရောက်သွားတာ ၀မ်းသာစရာအဖြစ် မှတ်ယူပါတယ် .. အဲ ဂျာနယ်လစ်တွေ ပိုက်ပိုက်ရသွားတော့လည်း မထင်မှတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ဦးကို ကူညီလိုက်တယ်လို့ သဘောထား အလူ အဖြစ်သဘောထားလိုက်ယုံဘဲပေါ့ဗျာ..
သူသိတတ်စွာနဲ့ ညွှန်းဆိုပေးရင်တော့ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ..
တစ်ခါလေး ဖြတ်ညှပ် ကူးခံရတာနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ရေးလိုက်တာလို့တော့ မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ ။ကြုံလို့ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ရေးတာများ အသုံးတည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်လည်းတောင်းစရာမလိုသလို ကျွန်တော်နံမည်လည်း ပါ ပါ မပါပါ နဲနဲဘဲဖြတ်ဖြတ် ၊ အကုန်လုံးဘဲ ကူးတင်တင် လွတ်လပ်စွာ ကြိုက်သလိုသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဆိုးတာကတော့ ကျွန်တော်ရေးတာတွေ ကူးတင်လောက်အောင် အရည်အချင်းမရှိသေးတာဘဲ … :grin: :grin:
ဟုတ်လား တုန်တုန် ကိုထူးဆန်းပိုစ့်ကို ဘယ်ဂျာနယ်မှာ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားတာလဲ ။ နာမည်လေး ပြောပါအုန်း ။ ဟီး..
တို့ရွာက ကိုထူးဆန်းတောင် နာမည်ကြီးလာပြီ။ ရွာလည်း ဂုဏ်တက်တာပေါ့။ :D
အစ်မပုခ်ျရေ … ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှုထိုင်နေတုန်း ကောက်ဖတ်လိုက်တဲ့ ဂျာနယ်မို့… ဘယ်ဟာမှန်းကို မမှတ်ထားမိဘူး … ။ ဆံပင်ညှပ်ပြီး ပြန်လာတော့ .. ဂျာနယ်မတွေ့တော့ဘူး … တခြားလူယူဖတ်သွားပြီထင်တာပါပဲ … ။
ဦးနှောက်ဖောက်စားတာကို ကျော်လွန်ပြီးသကာလ ဦးနှောက်ပါ အလုံးလိုက် မသွားသကိုးဟ ဗျစ်ဗျစ်ရ
အသိသတင်းထောက် တယောက်ကို မေးကြည့်တယ်။ နင်ဘယ်လိုသတင်းလိုက်လဲဆိုတော့သူကဖြေတယ်။ ဂျာနယ်တိုက်ကခိုင်းတဲ့နေရာမှာသတင်းယူတယ်။ များသောအားဖြင့် ဖုန်းနဲ့ပဲမေးလိုက်တယ်တဲ့။ ထိုင်ရာမထ သတင်းထောက်တွေက မြန်မာတနိုင်ငံထဲပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ တွေးလိုက်ပါတယ်။ သတင်းတော့တော်တော် တိကျအုံးမှာပဲလို့။
ကျမတို့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ပိုစ့်တွေ ကို ဂျာနယ် တွေ ကတောင် ကူးယူကြတယ်ဆိုတော့ ဘာမျမဟုတ်တဲ့ မိုချို့ အတွက်တော့ မန်းဂေဇတ်ရွာသူ ဖြစ်ရတာ ကိုယ့် ကိုကိုယ် သွေးနားထင် ရောက်သွားပြီ။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ…..ဟုတ်ပါ့……….. မိုချို့လို အကောင်းမြင်ဝါဒီဖြစ်ဖို့ တော်တော်လေ့ကျင့်ယူရဦးမယ် …… Thanks mocho
ဒီကွန်မင့်ဟာ ပိုစ့်မှားပြီးဝင်သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်။
ကော်နက်ရှင်က ပြတ်ပြတ်နေလို့ ကွန်မင့်ရေးချင်တာတွေကို word ထဲမှာ ရေးပြီးမှ ကော်ပီ-ပေစ့် လုပ်တာ
မနေ့ကတော့ ရေးထားတဲ့ ကွန်မင့်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ မှားကူးတင်လိုက်မိသဗျာ..
အဲလို အဲလို… :D :D
တော်သေးသပေါ့. သများဟာ တော့ ခူးကို မခံရတာ။ဟီးးးးး
အင်တာနက်မှာစာရေးမိတာ လည်စင်းပေးရသလိုပါဘဲ ကိုဒေးဗစ်ရယ်
အပျင်းကြီးတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တချို့ဟာ သတင်းကို ကိုယ်တိုင်မယူပဲ ဖုံးဆက်မေးရုံလောက်တင်မကဘူး..
သူများပါးစပ်နဲ့လျှောက်ပြောတဲ့ သတင်းကို ကိုယ်လဲဘာမှမသိပဲနဲ့ ခပ်တည်တည်ရေးထည့်လေ့ရှိတာ ဟိုးအရင်ကတည်းကပါ။
၁၉၉၆ တုန်းက ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ လုပ်ငန်းတခုထောင်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းကို အဲဒီအချိန်မှာ နာမည်အကြီးဆုံးဂျာနယ်က တလွဲတွေ သတင်းရေးပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျုပ်က အဲဒီဂျာနယ်ကို ဖုံးနဲ့လှမ်းဆက်ပြီး ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေ ဘယ်ကရလို့ရေးတာလဲလို့မေးတော့ လက်ကမ်းစာစောင်ကရလို့လို့ ဖုံးဖြေခွင့်ရှိတဲ့အဆင့်ကကောင်က ပြီးစလွယ်ဖြေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီသတင်းဟာမှားကြောင်း အချက်အလက်မှန်က ဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် letter head နဲ့ အကြောင်းကြားမှ နောက်တပတ်ကျော်မှာ ဖြေရှင်းချက်ထည့်ပေးတယ်….။
သူသတင်းမှား ရေးတုန်းက ခေါင်းစီးစာလုံးကြီးနဲ့ ပြူးတူးပြဲတဲ…
ဖြေရှင်းချက်ကျတော့ ဟိုးအတွင်းက စာမျက်နှာအောက်ဆုံး မှာ ဖေါင့်အသေးဆုံးလေးနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းအရွယ်လောက်လေး………
စိတ်ပေါက်တာနဲ့ တရားစွဲခိုင်းမလို့ …..
ပိုက်ဆံကုန်မှာကြောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းတားလို့….။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို အကူးခံရတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပေမယ့်…….
အားစိုက်ထုတ်ပြီး ရေးထားတဲ့သူကို အသိအမှတ်မပြုပဲ နေရာမပေးပဲ ကိုယ်တိုင်ရေးလိုလို ထည့်တာကျတော့ ဦးဏှောက်ဖောက်စားရာကျတယ်။ မရိုးသားရာကျတယ်။
အဲဒီလို စိတ်ထားရှိတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ရဲ့ စာကို ယုံကြည်လက်ခံဖို့ ခက်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ …. ခိုးတယ် မန်းဂေဇက်က တောင်ပါသေးတယ် ဆိုတော့ ကား ..ဘယ်စာမှုလဲ
ဘယ်သူရေးတာလဲ ခိုးတဲ့ ဂျာနယ် နာမည် ၊ ကလောင်ခံတဲ့ လူရယ်ဘယ် ရက်ထုတ်လဲ ဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက မန်းဂေဇက်ကလည်း နေရာတစ်ခုရှိတယ် ဒါ မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါမျိုးတွေ့လို့ ကတော့ ငြိမ်ခံနေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တွေ့ရင်တော့ ဘယ်သူဟာဖြစ်ဖြစ် ဂေဇက် ၀င် တစ်ယောက်အနေနဲ့ သက် ဆိုင်ရာ ဂျာနယ် လစ်ကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာ လောက်တော့ အနည်းဆုံး
ပေးရမယ်။ ကျွန်တော် ၅၀၀၀တန်ဖုန်းကို မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ ရေးတယ်။ရေးတဲ့ သူက ကျွန်တော့် ထက် နာမည်ရှိတဲ့ လူသို့သော် ကျောရိုးပဲ ယူထားတာ ၊ စကားလုံး တွေ dialogတွေ မတူဘူး ဒါကြောင့် ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဂေဇက်မှာ ပင်ကိုရေး များပါတယ် ကော်ပီ ၀င်လုပ်တဲ့ လူ
ဆိုတာကလည်း အသစ်လေးတွေ ပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပင်ကိုရေးတွေပဲ ရွေး ဖတ်ပါတယ်။
အခုဆို စာရေးဆရာ အသင်း ၊ သတင်းစာ ဆရာ အသင်းတွေ ဖွဲ့ စည်းနေပါပြီ ဒီမှာ လည်း တိုင်ကြား တင်ပြလို့ ရပါတယ်။ တကယ်ခိုးရင်တော့ တရားစွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်း တိကျဖို့ တော့ လိုမယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။